'Sing Again' LADIES' CODE Sojeong~~ "အခုဆိုရင်တော့ ပြုံးရယ်ချင်သော အဆိုတော်" - 빵야뉴스
최종편집 : 2021-02-26 20:19 (금)
EXO KAI, Esquire's March issue cover photo released
WayV's exclusive reality "WayVision 2" first broadcast on February 22nd!
L Kim Myung-soo enlisted in the Marine Corps on the 22nd
SHINee comeback, 7th regular album 'Don't Call Me' released
tvN 2021 drama 'Cliffhanger' starring Jeon Ji-hyun and Ju Ji-hoon
D.O. confirmed as the main character of the Korean version 'Secret'
Emma Stone unveils the first poster of Disney's 'Cruella'
현빈 GQKOREA 남성 美 터진 화보
중국 프듀 '창조영2021' 17일 첫 방송
청하 데뷔 4년 만에 첫 정규앨범 ‘Querencia’ 발매
엠마 스톤 디즈니 '크루엘라' 1차 포스터 공개
Lilboy x Miran သည် 'Living is Challenge' music video ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
하이라이트 완전체 바자 화보 공개
강다니엘, 16일 PARANOIA 발매
'Sing Again' LADIES' CODE Sojeong~~ "အခုဆိုရင်တော့ ပြုံးရယ်ချင်သော အဆိုတော်"
HOME M-MEDIA K-POP
승인 2020.12.01 23:45
[BBANGYA News | Reporter Khaing] LADIES' CODE Sojeong သည် JTBC ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်'Sing Again' တွင် ၃၀ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး 'All Again' ကို ရရှိခဲ့သည်။
ADIES' CODE အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော Sojeong သည် အဆိုတော်နံပါတ် ၁၁ အဖြစ် စင်ပေါ်တက်ခဲ့ပြီး 'ကျွန်မက အခုဆိုရင်တော့ ပြုံးရယ်ချင်သော အဆိုတော်ပါ' လို့ သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
LADIES' CODE အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ပါ၀င်သော girl groupအဖွဲ့၏ code အဖွဲ့အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည့် girl groupများထဲတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားမှုနှင့် တိုးတက်မှုအလားအလာကိုပြသခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလတွင် ကား accidentကြောင့် အဖွဲ့ဝင် Rise နှင့် Eunbi တို့ စွန့်ခွာသွားသည့် ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေက အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ အဖွဲ့ဝင် ၃‌ယောက်အဖွဲ့အနေဖြင့် ပြန်လာခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက သီးသန့်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့အခါ အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်။
Sojeong သည် Im Jae-beom ၏ 'emergency'ကို သီဆိုခဲ့ပြီး သူက "ကျွန်မ ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်နေပါတယ်။ ရှေ့လျှောက်လည်း အဲ့လိုလုပ်သွားပါမယ် အားပေးကြပါ"လို့ပြောချင်ပါတယ်။ Sojeong သည် တည်ငြိမ်သောသီဆိုနိုင်စွမ်းနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားစေသောအသံတို့ကြောင့် “All Again”ရရှိခဲ့သည်။
၃၀ ရက်တွင် 'Sing Again' ကြည့်ရှုနှုန်းသည် ၇.၈% ရှိပြီး Nielsen ကိုရီးယားအပေါ် အခြေခံ၍ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၂.၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် ၃ ပတ်ဆက်တိုက် ကြည့်ရှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် အကောင်းဆုံးမိနစ် ၁ မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည့် ၂၉ ကြိမ်မြောက်အဆိုတော်ဖြစ်သည့် Authentic Heavy Metal သည် Lim Jae-bum၏ 'Where Are You'သီချင်းဖြင့် 'All Again' ကို ရခဲ့သည့်အချိန်မှာ ၉.၅% အထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
'Sing Again' EP3တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော သီချင်းများသည် အဆိုတော် နံပါတ် (၁၁) အဆိုတော်၏ 'emergency'၊ အဆိုတော်နံပါတ် (၁)၏ 'Piano Man’၊ 'အဆိုတော်နံပါတ် (၁၇)၏ 'To you again'၊ အဆိုတော်နံပါတ် (၂၉)၏ 'Where are you၊ အဆိုတော်နံပါတ် (၃၇)၏ Ribeca'၊ အဆိုတော်နံပါတ် (၄၀)၏ 'Even Memories'၊ အဆိုတော်နံပါတ် (၆၇)၏ ‘Make Up’ စုစုပေါင်း ချင်း ၇ ပုဒ်ပါ၀င်ပြီး ၁ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီတွင် 'Sing Again EP3' အယ်လ်ဘမ်အဖြစ် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
'တက္ကသိုလ် ဂီတပွဲတော် Grand Prize' Pursean ၏ ပထမဆုံး single သီချင်း 'Hashtag'
Merrill Strip နှင့် Nicole Kidman သရုပ်ဆောင်ထားသော [The Prom] ထုတ်လွှင့်မည်
KBS တနင်္လာ-အင်္ဂါ ဒရမ်မာအသစ် 'Secret royal inspector' တွင် Kim Myungsoo-Kwon Nara-Lee Yi Kyungတို့၏ ဇာတ်ကောင် teaser ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၈ နှစ်အကြာမှ EXO Kai သည် သူ၏ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်သီချင်း Mmmh ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်
ENHYPEN သည် ယနေ့ (၃၀ရက်နေ့)တွင် 'BORDER: DAY ONE' အယ်လ်ဘမ်ဖြင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။
'True Beauty' ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းစာရှင်းလင်းတင်ပြပွဲတွင် Ga-young Moon X Eun-Woo Cha X In-yeop Hwang အချောတွေစုနေပါသည်
Nicholas Cage သည် သူ၏နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်နေသော Neil Patrick Harris နှင့်အတူ action comedy ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
Lee Seung-gi သည် ၅ နှစ်အကြာမှ သူ၏ ၇ ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အယ်လ်ဘမ်ဖြင့် ၁၀ ရက်နေ့တွင် comebackလုပ်မည်
'Cheat on me, if you can' ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး တစ်မိနစ်ကြည့်ရှုနှုန်း အမြင့်ဆုံး ၇.၆%
1 현빈 GQKOREA 남성 美 터진 화보
2 중국 프듀 '창조영2021' 17일 첫 방송
3 청하 데뷔 4년 만에 첫 정규앨범 ‘Querencia’ 발매
4 엠마 스톤 디즈니 '크루엘라' 1차 포스터 공개
5 Lilboy x Miran သည် 'Living is Challenge' music video ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
6 하이라이트 완전체 바자 화보 공개
7 강다니엘, 16일 PARANOIA 발매
8 SHINee is Back! Comeback after2years and6months